धौलागिरी अस्पतालबाट यो बर्ष १ सय ३३ जना हिंसा पीडितले नि:शुल्क सेवा लिए ! – ebaglung.com
धौलागिरी अस्पतालबाट यो बर्ष १ सय ३३ जना हिंसा पीडितले नि:शुल्क सेवा लिए !
२०७६ असार २६, बिहीबार २१:५४	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
कोपिला कंडेल, बागलु २०७६ असार २६ । चालु आर्थिक बर्षमा २० जना पुरुषहरु हिंसामा परेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । धौलागिरी अस्पताल अन्र्तगतको लैङ्गिक हिंसामा आधारित एकद्धार संकट ब्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी)मा चालु आर्थिक बर्षमा दर्ता भएका १ सय ३३ हिंसं पीडित मध्य २० जना पुरुष रहेको ओसीएमसी प्रमुख देबी भट्टराईले जानकारी दिए । गत बर्षको तुलनामा यसबर्ष पुरुष हिसांका घटनामा बृद्धि भएको छ । गत बर्ष ९ जना पुरुष हिसांमा परेका थिए ।
हिंसा पीडित बिभिन्न माध्यमबाट अस्पताल आउने गरेको र परामर्शका क्रममा लैङ्गिक हिंसा खेपेको जानकारी पाएपछि ओसीएमसीमा भर्ना गरेर निशुल्क उपचार गर्ने गरेको केन्द्र प्रमुख भट्टराईले कताए । अधिकाशं हिसां पीडित जिल्लाको साविक ३ नम्बर क्षेत्रका आउने गरेका छन् । केन्द्रमा आउने अधिकांश हिसां पीडितमा मानसिक र शारीरिक समस्या देखिने गरेको छ ।
सो अवसरमा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा.शर्मिला थापाले नेपालमा आधा महिलाहरुले कुनै न कुनै हिसा भोग्दै आएको बताईन । हिंसा पीडितहरु प्रहरी अदालत लगायत बिभिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्य संस्था आउने गरेका छन, थापाले भनिन् अधिकाशं हिसां पीडित घरपरिवार वा पाटर्नर बाटै हिंसा खेप्न बाध्य छन् । कुटपिट यौनजन्य हिसा बलात्कार मानसिक यातना लगायतका हिसा पीडित बिशेस गरी मानसिक र शारीरिक हिसा लिएर अस्पताल आउने गरेको उनको भनाई थियो । अधिकाश महिलाहरु हिसामा पर्ने गरेको भएपनि पछिल्लो समय हिसा पीडित पुरुष समेत आउने गरेको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासघंका अध्यक्ष दिल शिरिषले मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रम अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. सागर कुमार राजभण्डारीको अध्यक्षता र सुचना अधिकारी तिर्थराज गौतमको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
लोकसेवाले ४५ प्रतिशत समावेशी समुहका लागि छुट्टाउन मागगर्दै नेपाल मगर विद्यार्थी संघद्वारा ज्ञापन !
कलाकार अमर थापाको तीज गीत ‘घर छाडेर जा’ विमोचन !